तरकारीमा ब्यापारीको ठगी धन्दा चर्को, सस्तोमा किनेर कैयौँ गुणा महंगोमा बेच्छन्, कहाँ छ अनुगमन गर्ने निकाय ? – Dainik Sangalo
तरकारीमा ब्यापारीको ठगी धन्दा चर्को, सस्तोमा किनेर कैयौँ गुणा महंगोमा बेच्छन्, कहाँ छ अनुगमन गर्ने निकाय ?
August 6, 2020 101
काठमाडौं, साउन २१ । तरकारीको भाउ महँगो भएसँगै आम उपभोक्ताको भान्सा पनि महँगिएकोे छ । तरकारीको मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा मनपरी भाउ बढेको हो ।
चार जनाको परिवारलाई डेढ सय रुपियाँको तरकारीले एक छाक टार्न गाह्रो हुन थालेको छ । तरकारीबाहेक मरमसला, नुन तेलसमेत गर्दा एक छाक तरकारीको १६० रुपियाँ परेको अनुभव कलङ्कीकी उपभोक्ता रमा आचार्यले बताए । पहिले दुई÷तीनथरी तरकारी र अचार हुने रमाको भान्सामा अचेल एकथरी मात्रै तरकारी पाक्छ ।
कलङ्की चोकमै तरकारी भाउ बुझिरहेका वाफलमा डेरा गरी बस्ने विमल कार्कीले अब तरकारी किनेर खान सोच्नुपर्ने दिन आउन थालेको सुनाए । उनले तरकारी खान नसक्ने भएपछि यसको विकल्पमा गेडागुडीको टुसा उमारेर खाने सोच बनाएको बताए । कार्कीले तरकारीको भाउ छोइसक्नु छैन । लकडाउन खुलेपछि तरकारीको भाउ घट्ने आशा थियो, तर झन् महँगियो उनको भनाई छ ।
बजारमा प्रायः सबैखालका तरकारीको भाउ बढेको छ । अघिल्ला दुई साता प्रतिकिलो औसत मूल्य ४५ देखि ५० रुपियाँमा थोकमा किनबेच भएको आलु अहिले थोकमै ६८ देखि ७० रुपियाँ पुगेको छ ।
दसरपन्ध्र दिन अगाडिसम्म प्रतिकेजी ३० देखि ३५ रुपियाँसम्ममा पाइने ठूूलो गोलभेँडा थोकमै ६५ देखि ७० रुपियाँसम्म पुगेको छ ।
यस्तै बन्दा, बोडी, भन्टा लाम्चो, घिउसिमी, तितो करेला, लौका, परवर, लौका, घिरौंला, भिण्डीलगायत सम्पूर्ण हरियो सागपातको पनि यसैगरी भाउ बढेको छ । खुद्रामा त तरकारीको भाउ झन् छोई नसक्नु भएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
Prevकार्टुनमा नानी भेटिएको नाटक गर्ने पुष्पा र भाग्यको चर्काचर्की, आक्रोसित हुँदै सबैले आश्रम घेरे
Nextनेपालमा पहिलोपटक एकै दिन कोरोनाले छ जनाको मृत्यु
करिब ६ बर्ष मानव सेवामा बसेपछि स्वदेश फर्किँदा भ’क्कानिइन बेगम, ११ बर्षदेखी सम्पर्कवि’हीन परिवार भेट्दै
सुवर्ण अवसर ! साइप्रसमा भारी संख्यामा “महिला/पुरुष ” नेपाली कामदारको माग !